UltraSMSScript: Iibso SMS Dhamaystiran, MMS, iyo Qalabka Suuqgeynta Codka ee leh API | Martech Zone
UltraSMSScript: Iibso SMS dhameystiran, MMS, iyo Suuq Suuqgeynta Codka oo leh API
Khamiis, Juun 2, 2022 Khamiis, Juun 2, 2022 Douglas Karr
Bilaabida istaraatijiyad fariin qoraaleedku waxay noqon kartaa geedi socod fulineed oo adag. Rumayso ama ha rumaysan, sidayaal inta badan waa buug-gacmeed xataa maanta… soo gudbi warqado, haynta xogtaada iyo siyaasadaha khaaska ah dib ha loo eego, oo saxeex oggolaanshaha SMS. Iskuma dayo inaan dhayalsado muhiimada ay leedahay u hogaansanaanta dhex dhexaadintan, laakiin jahawareerka guurista ama isku darka xalinta SMS-ku waxay aad u niyad jabin kartaa suuqgeeye sharci ah.
Nidaamka loogu talagalay Suuqgeynta SMS waa mid aad u adag sida caadiga ah. Inta badan aaladda SMS, tusaale ahaan, way sameeyaan ma la xiriiraan oo si toos ah u dhexgalaan wadayaasha SMS -ka. Sida caadiga ah waxaa jira suuqgeyn SMS ama madal isgaarsiineed oo la xiriirta adeeg markaa ku xiraya albaabka farriinta oo markaa farriinta u diraya side.
In kasta oo goobta SMS-ku ay noqon karto mid cajiib ah, waxay ku tiirsan yihiin marinka fariinta SMS-ka si uu nidaamkiisu u shaqeeyo. Marka laga eego dhinaca qiimaha, taasi waxay ka dhigan tahay inaad bixiso software-kaaga, waxaad ku bixinaysaa khidmadaha fariimaha ee boosteejadaada, waxaad bixin kartaa helitaanka ereyo muhiim ah oo badan, ka dibna waxay bixiyaan kharashka fariimaha ee albaabka fariinta. Qiimaha SMS-ku si dhakhso ah ayuu u qarxi karaa… gaar ahaan maadaama ay macaamiishu si joogto ah u qaataan SMS-ka si ay ula falgalaan ganacsiyada.
Dhamaadka sanadkii hore, 48.7 milyan oo macaamiil ah ayaa si iskood ah u doortey inay ka helaan isgaarsiinta SMS noocyada ay jecel yihiin. 70% macaamiisha ayaa u maleynaya in suuq geynta SMS ay tahay wado fiican oo ganacsiyada ay ku helaan dareenkooda. 82% dadku waxay yiraahdaan waxay furayaan fariin kasta oo qoraal ah oo ay helaan.
- Lauren Pope, 45 Tirakoobka Suuq-geynta Macaamiishaadu Waxay Ku Rajeynayaan Inaad Ogaato
Waxaa jira albaabbo aad u adag oo la awoodi karo oo SMS ah oo ka baxsan halkaas oo aad iska diiwaangelin karto oo aad si toos ah uga faa'iideysan karto API-yada adag, oo ay ku jiraan Twilio, Plivo, Telnyx, SignalWire, Nexmo, Ytel, iyo Bandwidth. Aaladahaan waxay leeyihiin xirmooyin soo -saare softiweer oo isku xira API -yada adag si ay kaaga caawiyaan kobcinta SMS -gaaga ama is -dhexgalka sidaad doonto. Nasiib darrose, taasi, waxay u baahan tahay khibrad horumarineed, kaabayaal, iyo dayactir joogto ah.
UltraSMSScript: Iibso oo Habee Qalabkaaga Fariin SMS ah
Beddelka ka jaban ee lagu horumarinayo bartaada fariimaha SMS-ka ama bixinta khidmadaha shatiga bilaha ah ee madal online ah waa inaad iibsato koodka oo aad ku socodsiiso kaabayaashaaga. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad u kacdo oo aad dhaqso u socoto iyo sidoo kale hubinta in goobtaadu tahay mid u hoggaansan, badbaado, iyo xasilloon. UltraSMSScript waa software sumad-cad leh oo leh API oo aad iibsan karto oo aad ku rakibi karto laftaada ka dibna aad isticmaali karto mid ka mid ah albaabada SMS-ka. Ma jiraan wax ujro ah oo socda waxaadna bixisa kharashyo fariimo SMS oo la awoodi karo maadaama aad si toos ah uga shaqaynayso albaabbada.
Astaamaha UltraSMSScript Ku dar
Kuuboonada wareega - Abuur Kukboonado Mobile oo qurxoon si aad ugu dirto macaamiishaada. Waxay yihiin hab fiican oo lagu dhisi karo saldhig macaamiil daacad ah iyada oo waliba abaalmarinaysa macaamiishaada hadda. Kuuboon kasta gabi ahaanba waa la beddeli karaa waxaana ka mid ah dejinno badan iyo astaamo kuu oggolaanaya inaad dabacsanaato sida aad rabto inaad u dejiso.
Su'aalaha iyo Jawaabaha SMS - Abuur su'aalo SMS otomaatig ah iyo jawaabahooda kuwaas oo lagaa bilaabo inaad qoraal ugu dirto ereyga muhiimka ah. Waad abuuri kartaa su'aalo badan oo taxane ah sida aad rabto. Ku fiican taageerada macaamiisha, su'aalaha, uruurinta jawaab celin qiimo leh, iyo kordhinta liiskaaga.
U dir SMS Bulk - Ubucda ololaha suuqgeynta SMS-ga waa awooda aad ugu dirto fariimaha SMS-ka badan macaamiishaada U dir 1 koox ama kooxo badan hal mar! U dir farriimo macaamiishaada si aad ugu dhawaaqdo heshiisyo ama qiimo dhimis aad rabto inaad dhiirrigeliso taas oo keeni karta ganacsi ballaadhan.
Keywords Mobile aan xadidnayn - Awoodda isticmaalayaasha si ay ugu lug yeeshaan suuq-geynta ereyada muhiimka ah. Erayada furaha mobiladu waa shay ka mid ah ololayaasha suuqgeynta mobaylada si ay rafcaan uga qaataan suuqa bartilmaameedka ah. Waxaad heli kartaa ereyo muhiim ah oo aan xadidnayn! Dadku waxay isku qori karaan suuq-geynta qoraalkaaga iyagoo qoraal u soo dira kelmad muhiim ah.
Jadwalka SMS Jumlada Jadwalka farriimaha xilliyada u dhexeysa waa hab fiican oo lagu hubiyo in macaamiishaadu aysan ku iloobi doonin. Qoraalkayagu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si buuxda u xakameyso goorta farriimaha SMS-ga la diro si aad jadwal ugu sameysato farriimaha bilo kahor.
Xayeysiinta qorayaasha - Ka dib marka qofku ku biiro liiskaaga macmiilka, si toos ah ugu soo dir fariin qaas ah dib. Waxa kale oo aad dejin kartaa gawaarida gawaarida si toos ah ugu soo diraan SMS macaamiishooda ka dib markay iska diiwaangaliyaan jadwalka horay loo sii qorsheeyay sida shaqada email-ka shaqa-joojinta.
U dir MMS / Fariinta Sawirka - MMS waxay u keentaa emaylka ugu fiican iyo deg degga SMS isgaarsiinta macaamiishaada. Sawir dhammaan sawirka leh taleefan kasta oo mobiil leh, oo leh kudhowaad 100% qiimayaasha furan iyo waqtiyada jawaabta degdegga ah.
2-Way Wadahadal SMS ah - Wadahadalka 2-way ee SMS wuxuu kugu xirayaa adiga ama waaxda adeegga macaamiisha macaamiishaada moobiilka, SMS ahaan. Soo ururi ra'yi-celin qiimo leh oo xiriir ula samee macaamiishaada waddo 2-dhinac ah, dhammaantoodna ku soo dir SMS adigoo adeegsanaya farriin deg deg ah!
Xisaabaad-hoosaadyada - Ma leedahay xubno ka tirsan kooxda oo aad doonayso inaad u igmato ka shaqaynta qaybo kala duwan oo ka mid ah mooramka oo keliya oo aad siiso iyaga marinno astaamo gaar ah? Waxaad ku sameyn kartaa taas akoonadayada-hoosaadyada!
Farriimaha soo noqnoqda - Ma u baahan tahay inaad jadwal u samayso fariimo taxane ah oo soo noqnoqda? Waxaad ku celin kartaa dhacdooyinka maalin kasta, toddobaadle, bille, iyo sannadle, iyo inta jeer ee dhacdooyinka la qorsheeyay (maalin kasta, maalin kasta 2nd, maalin kasta 5th, hal mar toddobaadkii, 2 toddobaad kasta, iwm…)
Tartanada SMS - Abuur tartamada SMS si aad uga qaybgasho oo aad u abaal-marinayso macaamiishaada hadda iyadoo sidoo kale u isticmaaleyso aalad weyn oo aad ku kobcin karto liiskaaga. Ma jiro wax ka muhiimsan in aad macaamiishaada ka farxiso oo aad kor u qaaddo liiskaaga isku mar!
Dhalashada SMS Rabitaan - Si fudud u soo ururi maalmaha aad la xiriirto dhalashadaada markay liiskaaga ku biiraan. Kadibna, dhalashadooda ama xitaa maalmo cayiman kahor, nidaamkayagu wuxuu si otomaatig ah ugu soo diri doonaa farriinta qoraalka dhalashadaada.
Isdhexgalka Facebook - Awood u lahaanshaha inaad la wadaagto fariintaada boggaaga Facebook! Sii faafi oo kordhi kaqeybgalka taageerayaashaada adiga oo ku siinaya awood aad ku kobciso macaamiishaada adoo la wadaagaya fariimahaaga koontadaada Facebook.
Xogta Soo Diritaanka Jumlada Badan - Arag tifaftiran sida # fariimaha guulaystay, # farriimaha guul-darraystay, iyo sababta fariintu u fashilantay, oo u ogolow isticmaaluhu inuu ka tirtiro rukunka liiska ku guul daraystay inuu helo fariimaha.
Falanqaynta Ololaha oo faahfaahsan - Lasoco ololahaaga si aad si qoto dheer ugu fiirsato ereyada muhiimka ah ee fulinaya kuwa ugufiican, diiwaanada faahfaahsan ee SMS, iyo macaamiisha cusub iyo kuwa aan kaqor bixinaynin mudo cayiman.
Widgets Websaydhka Websaydhka - U oggolow macaamiisha suurtagalka ah inay ku soo biiraan liiska suuq geynta ee SMS iyada oo loo marayo foomka ku saleysan websaydhka oo la dhigo websaydhka. Tani waxay bixisaa waddo kale oo kharash-ku-ool ah oo lagu gaaro oo lagu soo jiito macaamiisha cusub.
Codbixinta SMS - Abuur cod bixin cod-bixin ah si macaamiishaadu ugu mashquuliyaan una xiiseeyaan waxa aad bixinayso iyo sidoo kale inaad uruuriso macluumaad qiimo leh oo aad ku kasbato waxa ay doonayaan iyo waxa ay kaa doonayaan.
Dhismaha Bogga Splash Mobile - Kufiican kuwa isticmaala ee raba inay ku abuuraan bogag iyaga u gaar ah oo leh fiidiyoow, sawirro, ama wixii HTML ah ka dibna u diraan boggaas URLs-ka liistadooda liistadooda si ay u eegaan. Ku qalabaysan tifaftire HTML oo si buuxda u muuqda.
Xusuusiyeyaal Ballan - Jadwal u samee una dir xusuusinta ballanta macaamiishaada adoo hubinaya inaysan ilaabi doonin ballan ay sameeyeen. Raadi xiriiriyahaaga ka dibna si fudud u samee jadwal SMS ah si aad ugu aaddid iyaga.
Gaabin Isku Xidhka & Raadinta - Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad soo gaabiso xiriiriyeyaashaada si aysan u qaadin astaamo badan oo fariimahaaga qoraalka ah sidoo kale waxaad la socotaa inta jeer ee loo sameeyay xiriir xiriiriye si aad u aragto sida farriintaadu u ahayd mid waxtar leh. Qalab yar oo wax tar leh!
Lambarada Deegaanka - Soo ururi ra'yi-celin qiimo leh kana dhig isgaarsiinta waddo 2-waddo ah dhammaanteed lambarrada taleefannada ee la garan karo! Kudar lambarro badan oo maxalli ah koontada isticmaalaha. Fariimo uga dir lambarada taleefannada si aad u dardar geliso gudbinta ama aad u gaabiso.
Ogeysiisyada emaylka - Hel digniino iimayl macaamiil cusub ah sida ay u dhacaan ama soo koobid maalinle ah. Sidoo kale, hel digniino emayl dheelitir oo hooseeya si aad had iyo jeer uga feejignaato goorta lagu buuxinayo dhibcahaaga.
Mawduucyada Farriinta - Keydso fariimaha SMS-ka ee caadiga ama badanaa la isticmaalo si aanad dib ugu soo celin isla fariintii si isdaba joog ah. Si fudud u dooro shaxanka aad u adeegsanayso oo ay kuugu soo koobaan fariinta adiga.
Telefishanka Ka Diyaari - Ma baxsadbaa? Dhib malahan gabi ahaanba! Waxaad awood u lahaan doontaa inaad ku qarxiso ololayaasha suuqgeyntaada SMS fariin qoraal ah oo fudud! Looma baahna inaad gasho koontadaada si aad u maamusho howshan.
Xeerarka QR - Abuur koodhadhyada 'QR' si ay kuugu xiraan ololahaaga suuqgeynta khadka tooska ah khadka tooska ah ee internetka. Barnaamijkayagu wuxuu ku yimaadaa qalab cusub oo cusub iyo bog URL URL QR.
Qaybta Xiriiradaada - Shaqadayada kala-saarista kooxeed, waxaad si fudud ugu abuuri kartaa kooxo ku jira liistadaada suuq-geynta qoraalka. Tani waxay abaabulaysaa xiriiradaada kooxo waxayna kuu ogolaaneysaa inaad habeysid dhamaan macaamiishaada iyo meesha ay ka imaanayaan!
Baahinta Codka - U sii daa fariin cod ah xiriiriyeyaashaada! Midkood farriin ku qor oo nidaamku qoraalka ayuu cod ugu beddelayaa, ama farriintaada u sii buuxi faylka MP3 ah. Hab kale oo weyn oo lagula xiriiro loona ilaaliyo xiriiradaada ku hawlan bixintaada.
Soo rar Liisaska Macaamiishaada - Hayso liiska xulashada ee SMS-ka meel kale oo aad rabto inaad ka soo haajirto? Haddii aad haysato oggolaansho qoraal ah oo cad oo ka socota macaamiishaada inay kugu raaceen inay kaa helaan farriimaha adiga, waad soo gudbin kartaa liiskaaga sidoo kale. Waxaan ka dhignay hawshaas si fudud oo fudud!
Farriinta Codka / Soo gudbinta Wicitaanka - Farriinta codka iyo awoodda gudbinta wicitaanka. Ikhtiyaar u yeelo in wicitaanadaadu si toos ah ugu socdaan farriinta codka, halkaas oo aad markaa ka dhegeysan karto iyaga gudaha guddiga koontaroolka, ama wicitaanadaada loo diro lambar kasta oo aad rabto!
SMS ugu dir Email / Email ugu dir SMS - Hel ogeysiisyada iimaylka marka qof wax ugu soo diro lambarkaaga khadka (SMS ilaa iimaylka). Kadib waxaad si toos ah uga jawaabi kartaa iimaylkaa macmiilkaaga iimaylka, nidaamku wuxuu qaadan doonaa iimaylkaas, oo dib ugu soo qori doona (Email to SMS). Qalab weyn oo aad u faa'iido badan!
Magaca iyo Qabashada Emailka - Hayso ikhtiyaarka aad ku ururin karto magaca iyo iimaylka macaamiil cusub oo ku biiraya liiska gaabsigaaga! Ururi magacyo si aad u shakhsiyayso fariimahaaga SMS-ka iyo iimayladaada haddii aad rabto inaad iyaga ugu xayeysiiso ololaha suuqgeynta iimaylka.
Maamulka Xiriirka - Aad u fudud in la isticmaalo nidaamka maaraynta xiriirka ee ay ku jiraan xiriiradaada / macaamiishaadu. Ka raadi oo maamul dhammaan macaamiishaada halkan.
Abaalmarinada Daacadnimada Kaadhka SMS Punch - Iska ilooba kaararkaas qadiimiga ah ee inta badan la khaldo. U soo dir SMS "kaadhka feerka" abaalmarinta daacadnimada macaamiishaada oo waxaad u dhistaa daacad u noqoshada astaantaada si aad macaamiisha uga dhigto mid faraxsan oo soo laabanaya.
Dhismaha Kiosk - Dukaanka daacada u ah dhijitaalka dijitaalka ah waa qalab goos goos ah oo kuu ogolaanaya inaad sameysid bandhig dukaan si fudud loo isticmaali karo. Waxay siisaa macaamiishaada goobta bandhig muuqaal ah oo saaxiibtinimo leh - oo u oggolaanaysa inay ku biiraan naadi guurguura, hubi barnaamijka daacadnimada, oo hubi xaaladdooda hadda.
API - Ka hel astaamaha ugu muhiimsan ee barxadda UltraSMSScript adoo adeegsanaya API. Isku-darka UltraSMSScript API-ga barnaamijkaaga ayaa awood kuu siineysa inaad ku ballaadhiso howlaha barmaamijka barnaamijkaaga!
Isku-darka Emailka - Haddii qabashada iimaylka uu shido, si toos ah ugu dar emayllada adeegyada iimaylka ee aad jeceshahay sida Mailchimp, Weber, GetResponse, ActiveCampaign, ama Sendinbuluug! Dhammaan si aan kala go 'lahayn ayaa loo maareeyay muuqaallada gadaashiisa.
Faks Online ah - Dir oo hel faakisyo u dhexeeya UltraSMSScript iyo mashiinka fakiska! U guuri buug-gacmeedka, habka offline-ka ah ee fakis-ka oo u rog dukumeenti fakis ka yeel khibrad software iyadoo la siinayo ganacsiyada dabacsanaan badan oo ay uga guuraan qalabkii hore ee dhaxalka ahaa.
Laab-laabasho - Ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo ikhtiyaar ikhtiyaar ah u leh ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo haddii la shito, dadku heli doonaan farriin dheeri ah oo qoraal ah oo lagu weydiinayo inay ku jawaabaan "Y" si loo xaqiijiyo ka mid noqoshadooda. Double opt-in qasab maahan, hase yeeshe, waxaa aad loogu taliyaa xaaladaha qaarkood iyadoo kuxiran waxyaabaha ay ka kooban yihiin fariimaha aad diri doontid.
Loogu talagalay qaabka loo qaabeeyey ee ah Qoraalka PHP, waxaad heli doontaa dhammaan koodhka isha si loogu oggolaado inaad beddesho walxaha naqshadda hore-dhamaadka haddii aad rabto inaad siiso muuqaal kasta oo aad dareento inaad rabto. Si kastaba ha noqotee, inta badan feylasha gadaal-dhamaadka ayaa la qori karaa. UltraSMSScript isticmaalka ioncube si loo kaydiyo loona liis galiyo faylasha. Shirkadaha martigelinta badankood waxay horeyba u leeyihiin rakibiyaha ioncube rakibay oo awood u yeeshay maadaama ioncube ay tahay heerka warshadaha ee lagu ilaaliyo feylasha xasaasiga ah. Xirmooyinka Heerka 4 & ULTRA ee qoraalka, waxaad heli doontaa 100% koodhka isha iyo, dabcan, waxaad saxiixday heshiis aan dib-u-iibin ahayn oo sheegaya inaadan dib u iibin doonin qoraalka dhabta ah.
Iibso UltraSMSScript Hada!
Shaacinta: Waxaan u adeegsanayaa xiriiriyeyaal ku xiran qodobkaan.
Tags: AWebersms smssoo gudbinta wicitaanemail ugu dir smsGetResponsegaabinta isku xidhkanambarada sms ee deegaankamailchimpMMSfakiska internetkascript phpXeerarka QRSendinBluefalanqaynta smssms jawaab celiyahasms botsms wada hadalsms xiriiriyahasms kuuboonadaereyada muhiimka ah ee smssio dusha smsbarnaamijka daacadnimada smsdoorashooyinka smssms qaybsanaantasms si aad u soo dirtosms widgetbaahinta codkasuuqgeynta codkamadal suuq geynta codkacodka
Bogagga Horudhac ah: Ku ururi hogaanka boggaga soo degista ee jawaabta leh, Popups, ama baararka digniinta
Qiyaasta Suuqgeynta iimaylka: 12 Tilmaamaha Waxqabadka Muhiimka ah ee ay tahay inaad la socoto